Anyị nwere ike ịhụ enyi na Spotify na otú? Ị na-nri ebe
Anyị Pụrụ Ịchọta Enyi on Spotify na Olee?
Spotify nwere otutu atụmatụ na anyị bụ nnukwu onye ofufe nke, ọtụtụ anyị tụleworo na n'oge gara aga dị ka mma. Otú ọ dị, e nwere ihe pụrụ iche banyere Spotify na bụ nanị amamihe; n'agbanyeghị nke ịbụ nnọọ a music gụgharia ọrụ, a ọtụtụ ndị interface na Spotify e mere kwupụta na-esonụ ndị enyi gị na-ekere òkè gị music na ha.
Izugbe Gaa nhọrọ maka esonụ enyi gị bụ 'Soro' taabụ. Mgbe dakwasịrị ya, ọ na-enye gị ọtụtụ aro na ndị na-eso Otú ọ dị mgbe ọ na-abịa na-achọ onye na-akpan akpan, Spotify nwere ya niile agwakọta elu. Ọfọn, anyị bụ ndị a na-eme ka ọ niile mfe n'ihi na ị.
Part1. Olee otú ịchọta enyi na Spotify
Part2.How ibudata site Spotify na-eso ndị enyi gị
Part3. Nyefee music ka enyi 'mobile
1.How aka ịchọta ndị enyi na Spotify
Iji malite, nbanye gị Spotify akaụntụ na pịa na Soro nhọrọ. Nke a nhọrọ adịghị na-akpaghị aka sere n'elu na-egosipụta na gị Facebook ndị enyi na-nwekwara on Spotify.
Ugbu a, pịa na search igbe nyere n'elu aka ekpe n'akụkụ na ụdị na aha onye na ị chọrọ ịhụ na kụrụ Tinye. Maka aha ya na-egosi elu, ọ ga-abụ na Spotify na kwa a na kọntaktị na akaụntụ gị Facebook.
Chọọ maka ndị enyi gị na iji ha aha njirimara. A otutu ha onye debanyere on Spotify ha na Facebook akaụntụ ghara maara ihe ndị ha Spotify aha njirimara bụ. Ya mere, ị nwere ike ịkpọtụrụ ha iche iche na-arịọ ha ka nbanye on Spotify, ịnweta akaụntụ nhọrọ na mgbe ahụ ego ihe ha na aha njirimara bụ. Ozugbo ị nwere ya, na-achọ ya na-eji akaụntụ gị na-aghọ nnọọ mfe.
Nanị gaa search igbe ọzọ a na oge ụdị na 'Spotify: njirimara: aha njirimara' na kụrụ Tinye. Ebe a, dochie aha njirimara na n'ezie aha njirimara nke ndị enyi gị.
Olee otú ibudata site Spotify na-eso ndị enyi gị
Nwere ị nụrụ a music ị na nso nso mmasị na Spotify na chọrọ ibudata ma ọ bụ chekwaa ya ka ọ na-ege ntị mgbe offline? Ọfọn, m m obi ụtọ ka ị mara na Wondershare TunesGo Emeela nbudata site Spotify na ndị ọzọ na music nkwanye saịtị nnọọ mfe ma dị mfe. Ọ nwere wuru na atụmatụ na-ahapụ gị ibudata ma ọ bụ ịzọpụta ọ bụla music si Spotify na ndị ọzọ na music nkwanye saịtị ziri ezi gị na kọmputa na dị nnọọ ole na ole clicks. Soro nzọụkwụ n'okpuru ngwa ngwa download si Spotify.
Si gị Spotify ngwa, họrọ music ịchọrọ ibudata na pịa na play button
Open Wondershare TunesGo na pịa teepu na n'aka-ekpe n'akụkụ wee pịa na rec na etiti nke Wondershare TunesGo ịmalite ndekọ.
Mgbe ị na-mere ndekọ, pịa na nkwụsị button dị ka e gosiri na foto n'okpuru.
Ịhụ gị dere music, pịa Kọrọ na n'aka-ekpe n'akụkụ nke Wondershare TunesGo software.
Iji zọpụta gị na kọmputa, họrọ music ị chọrọ ịzọpụta na pịa Export. Ugbu a, họrọ ọnọdụ ị chọrọ ịzọpụta ya na ị na-eme.
3.Transfer music ka enyi 'mobile
Nyefee music dị nnọọ wee a otutu mfe na ngwa ngwa na Wondershare TunesGo. Ọrụ nwere ike nyefee music n'etiti ha ntị na enyi ha ekwentị ma ọ bụ iPhone ka Android ma ọ bụ iPhone ka iPhone ma ọ bụ Android ka Android. A mfe nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro nyefee music na-e gosiri n'okpuru.
Mepee Wondershare TunesGo na jikọọ na enyi gị 'mobile gị na kọmputa.
Họrọ ihe ị chọrọ nyefee na pịa na transfer bọtịnụ.
Pịa bọtịnụ na ala n'aka nri nke ihuenyo ịhụ na okwukwe
Ọzọ atụmatụ nke Wondershare TunesGo
The mfe ọrụ interface nke Wondershare TunesGo na-eme ka ọ dị mfe maka ọrụ ibudata, ndekọ na nyefee music. Wondershare TunesGo anaghị akwụsị na Spotify naanị, ọ na-akwado YouTube, Sound ígwé ojii, Pandora, Vimeo na ọtụtụ ndị ọzọ. Nke a pụtara ọrụ nwekwara ike ibudata music si YouTube, Sound Ígwé ojii na saịtị ndị ọzọ na ala.
Na òkè atụmatụ nke Wondershare TunesGo-eme ka ọ ọbụna ndị ọzọ egwu. Ọrụ nwere ike ịkọrọ ha music na playlist na ndị enyi ha na-elekọta mmadụ na mgbasa akuko na email. Ịkọrọ gị playlist ndị enyi gị na Facebook ma ọ bụ Twitter na ka ha mara ihe ị na-ege ntị na-ekere òkè atụmatụ.
Ị chọrọ hazie gị iTunes n'ọbá akwụkwọ? Wondershare TunesGo bụ ngwá ọrụ gị. Ọ na-enyere gị aka hazie gị iTunes n'ọbá akwụkwọ site gwara gị music mkpado, gwara gị music cover, ihichapụ oyiri songs na ọbụna nhicha efu egwu na-gị ọbá akwụkwọ dị ọcha na ọhụrụ. Ndị a niile nwere ike mere na dị nnọọ a click nke a bọtịnụ.
Ọrụ nwekwara ike tọghata ha music ka a format dakọtara na ha ngwaọrụ. Ọ dịghị ihe ọzọ na-echegbu banyere ndakọrịta nke a music na ngwaọrụ gị n'ihi Wondershare TunesGo-ahapụ gị tọghata ọ bụla music faịlụ ona ngwaọrụ gị usoro.
Ndabere gị dum music n'ọbá akwụkwọ na-adịghị atụ egwu adịkwa gị music na playlist. Nanị pịa na "ndabere music na listi ọkpụkpọ na kọmputa gị" button mgbe Ijikọ ekwentị gị ndabere gị music na listi ọkpụkpọ. Ọrụ nwekwara ike ịnweta azụ elu mgbe ọ bụla ha chọrọ ya maka weghachi.
Site na-ahazi gị ọbá akwụkwọ na-ebufe music na site n'ịtụgharị gị music ka nbudata music, Wondershare TunesGo atụmatụ-eme ka ọ zuru okè ngwọta maka gị.
Esi Spotify Mmụta Discount
Olee otú na-ege ntị Spotify Unlimited site Spotify Family
Olee otú edebanye ma ọ bụ Nbanye na Spotify Akaụntụ
I Kwesịrị gaghị agbaghara ụzọ ndị a na-Ekekọrịta Ndetuta egwu ọkpụkpọ on Spotify
Olee otú ọtụtụ Ihe Ị Maara Banyere Ndị a Spotify Discount?
Olee otú Spotify-arụ ọrụ?
Olee otú ọtụtụ Ihe Ị Maara Banyere Spotify Logo
Olee otú Hichapụ Spotify Akaụntụ-adịgide adịgide na Wepụ Spotify
> Resource> Spotify> Anyị Pụrụ Ịchọta Enyi on Spotify na Olee?